Nhau - Izwi rakakosha reAmazons fanicha "kugutsikana"
Izwi rakakosha reAmazons fenicha "kugutsikana". Yedu bhizinesi uzivi ndeyekupa vatengi neinogutsa kwazvo fenicha ruzivo sevhisi. Kana vasina kugutsikana, ticharamba tichipa basa remahara kudzamara mutengi agutsikana. Iyo yepakati tsika kutendeseka uye kuvimbika uye nekukurumidza kupindura kumubvunzo mibvunzo.
Amazons Furniture yakagadzwa mu2012, pakutanga, yaive ichinyanya kuita kugadzirwa kweAmerican makabati uye paneli fenicha. Ikozvino rave repakati-saizi fanicha mutengesi anokwanisa kuendesa yakasimudzwa masofa, yakasimba huni fanicha, uye mapaneru fenicha.
Chinangwa cheAmazon Furniture ndechekuti uve nyanzvi yekugadzira fenicha. Iyo yakakosha kukosha kusanganisa yakanakisa fenicha mutengesi kwatiri kuti ipe vatengi neakanakisa mhando ruzivo nekukurumidza uye zvirinani. Nekutevedzera kune yevatengi aesthetics, dhizaini yacho Yakakurumbira fenicha, cheka mutengo wezvigadzirwa, kuti uwane yakawanda fanika musika mugove sezvinobvira.
Munguva ye COV-19 denda muna 2020, Amazons Furniture yakanangana nekugadzira zvigadzirwa zvitsva zvinokodzera musika uye kuisa simba rakawanda mukuvandudza nekugadzirwa kwemidziyo yemhuka. Ikozvino fenicha fenicha senge imbwa dzimba, imbwa dzimba, dzinovaraidza mibhedha, Chipfuyo fenicha senge makushoni ave zvishoma nezvishoma akawana musika mutsva.